Olana voalohany IPad Pro: tsy hivadika rehefa averina | Vaovao IPhone
Tamin'ny fahatongavan'ny fitaovana vaovao teny an-tsena, ny fikarohana voalohany nahita ny atin'ny fitaovana tonga toy ny mahazatra. Ireo tovolahy avy amin'ny iFixit dia efa nampahafantatra anay ny Fahasarotana amin'ny fametahana ny ampahany amin'ity fitaovana ity izay manimba antsika. Faly ny ankamaroan'ny mpampiasa nanandrana ity fitaovana ity, saingy mbola tsy izay no tadiavin'i Apple: fitaovana ahafahantsika manafoana ny solosaina finday sy ny birao mandrakizay.
Rehefa tonga ny fikarohana voalohany dia manomboka tonga ihany koa ny olana voalohany amin'ity fitaovana ity. Toa mpampiasa maromaro no nameno ny dinika Apple qFitarainana mangidy momba ny olana atolotry ny iPad Pro.
Toa taorian'ny nandaozany ilay fitaovana nandritra ny ora maro mba hiampangana azy, ny fitaovana dia tsy mamaly ary tsy mamela hivadika sy hampiasa azy io ara-dalàna. Amin'ny fotoana maro dia voavaha ny olana amin'ny alàlan'ny famerenana mafy ny fitaovana, ny fanindriana ny trano sy ny bokotra fanombohana mandritra ny segondra vitsy mandra-pipoaky ny paoma an'ny orinasa Cupertino.
Ity olana ity dia niseho tamin'ny fomba manokana tamin'ny mpampiasa sasany, saingy rehefa mandeha ny andro dia lasa zavatra manelingelina ny mpampiasa izany. Mitranga foana ny olana rehefa vitantsika ny famenoana ny fitaovana mandritra ny alina na raha apetratsika hiasa mandritra ny ora vitsivitsy mandritra ny andro. Rehefa tapaka ny fitaovana dia tsy mamaly amin'ny fomba rehetra.
Ity olana ity dia tsy noho ny fipetraky ny bateria, satria na dia maro aza ireo mpampiasa miandry mandra-pahatongan'ny kelin'ny bateria dia misy io olana io ihany koa amin'ireo mpampiasa izay manome vola ny fitaovana amin'ny bateria 40% na latsaka. Ireo fitaovana izay iharan'ity olana ity dia ireo maodely telo natombok'i Apple teny an-tsena. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ny hahalala raha olana na rindrambaiko ny olana, saingy misy ny mpampiasa mihevitra fa mety ho tonga ny olana rehefa mamerina kopia taloha amin'ny alàlan'ny iCloud.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Olana voalohany IPad Pro: tsy hivadika aorian'ny famandrihana